The new SR 99 tunnel under downtown Seattle - Somali - Bedelada kale ee socdaalka inta lagu jiro qiyaastii saddex-todobaad ee uu xidhan yahay SR 99 | WSDOT
homeAlaskan Way Viaductthe new SR 99 tunnel under downtown SeattleSomali - Travel alternatives
Somali - Bedelada kale ee socdaalka inta lagu jiro qiyaastii saddex-todobaad ee uu xidhan yahay SR 99
Somali - Diyaar garow: saddex-todobaad SR 99 xidhidu waxey bilaabmaysaa Jan. 11, 2019
Bedelada kale ee socdaalka inta lagu jiro qiyaastii saddex-todobaad ee uu xidhan yahay SR 99
Si loo furo tunnelka SR 99, Waaxda Isgaadhsiinta Gobolka Washington (WSDOT) waxaa la qorsheeyey iney xidho SR 99 ilaa suuqa hoose ee Seattle qiyaas ahaan saddex todobaad oo ka bilaabmaya Janaayo 11, 2019, halka kooxo ay dhisayaan dalcadaha iyo wadada tareenada si loo kulmiyo SR 99. Dalcado dheeraado la xidhayo kahor iyo kadib xidhitaanka guud waxey la micno tahey socdaalayaashu, gaar ahaan kuwa u socdaala suuqa hoose ee koonfur iyo waqooyi, waxey waajihi doonaan ilaa lix todobaad oo khalkhal xidhig ah.
Waxaanu oganahay in xidhitaankani uu ukeeni doono khalkhal wayn isu socodka gaadiidka gobolka iyo deegaanka. WSDOT iyo haayadaha ay wada shaqaynayaan waxay samyanyaan waxyaabo kala duwan si loo ilaaliyo dadku inay socdaan, waxayna ka dalban doonaan dadka socdaalaya gaadiidka shacanta raacaya iyo shaqaalaha inay hore usoo baxaan.
Si loo diyaariyo, hoos waxaa ah woxogaa fikiro ah sidii aad u bali laheyd socdaalkaaga inta lagu jiro xidhida.
Hagaaji wakhtiyada socdaalkaaga & ogow kahor intaadan tagin
Hadii jadwalkaagu uu fududyahey, tixgali hagaaji saacadaha shaqadaada si aad uga isagaka ilaaliso wakhtiyada socdaalka inaad ka habsaanto (caadi ahaan 6 ilaa 10 subaxnimo iyo 3 galanimo ilaa 7 fiidnimo), kaasoo ka bilaabmi kara xili ka hore oo dhamaana kara xili ka danbeeya saacadaha caadiga ee saxmada gaadiidka.
Kahor intaadan socdaalin, fiiri wakhtiyada socdaalka ee imika oo joog. Isticmaal xisaabiyaha socdaalka onlineka ah ee WSDOT, qariirada xogta socdaalayaasha SDOT, ama agabka socdaalka gaadiidka oo kale oo wakhti-saxa si loo helo markaad u baahantahey inaad tagto si aad u timaado meeshaad dooneyso wakhtigii loo baahnaa.
Khayraadka qorshaha socdaalka:
bogga wakhtiyada socdaalka tooska ah ee dhulka-Seattle WSDOT
barnaamijka mobeelka ee socdaalka gaadiidka WSDOT
Kaameradaha tooska ah ee socdaalka gaadiidka ee WSDOT
Qariirada Xogta Socdaalayaasha SDOT
Daaqada safarada gaadiidka dadka waawayn la raacayo ee Seattle
Nasasho iyo park & rides
Waxaa jira in ka badan wakaalo nasasho oo darsin ka badan oo ka hawlgala deegaanka Puget Sound, dhamaan ka shaqeynaya inay ku geeyaan halkaad dooneyso inaad tagto. Fiiri dookhyadaada nasasho adigoo isticmaalaya khayraadka qorshaynta dalxiiska ee ku taxan midigta.
Hadii macquul tahey, qorshee socdaalkaaga inaad raacado gaadiidka dadka waynaha saacadaha saxmada ka baxsan si aad iskaga ilaaliso inaad socdaasho marka basasku ay noqon karaan saxmad. Fiiri King County Merto iyo websiteka Sound Transit cusboneysiin adeeg, ay ku jiraan dib u hagaajinta wadooyinka basaska ee ay isticmaalaan ee viaduct. WSDOT, King County Metro, Sound Transit iyo wakaalado nasasho ee maxali ah oo kale waxey iskula shaqeynayaan si dhow si dadka loo ilaaliyo socodka.
Websaytka King County Get-Ready
King County Travel Options
Qorsheeyaha Socdaalka Sound Puget (kombuyuutar)
Qorsheeyaha Socdaalka Sound Puget (barnaamijka mobeelka)
Goobaha iyo xogta Park & Ride
Barnaamijka mobeelka ee OneBusAway
Get Ready - King County Metro
Linkyada la riixi karo si online loogu galo
Llame a King County Metro al
Kala hadal King County Metro si laguu caawiyo qorshaynta socdaalka 206-553-3000
Guriga kasoo shaqeyn
Guriga kasoo shaqeyn, ama socdaalin, waxey kuu ogolaaneysaa inaad dhaafiso socdaalkaaga dhamaantii hadana aad shaqadaada dhameysato. Kala hadal cida aad u shaqayso dookhyo macquula inaad kasoo shaqeyso guriga hal maalin ama wax ka badan todobaadkii inta lagu jiro xidhida.
WSDOT Travel Choices
King County WorkSmart
Rideshare: carpool, vanpool iyo vanshare
Hel dad kuu dhow oo xiisaynaya in kharashka gaadhiga socdaalka aad la qaybsato ama kharashka baska socdaalka aad qaybsataan wakhti daqiiqado ah adigoo isticmaalaya RideshareOnline.com - adeeg gaadhi isku beegis oo bilaash, macquul, online ah.
King County Metro Rideshare Programs
King County Rideshare Rewards
Adeega macaamiisha: 206-625-4500
Ma aheyd mid macneeya inaad isku daydo socdaalka baaskiilka? Imika waa fursad fiican! Baaskiilku waxu uu kaa baajinayaa inaad gaaadhiga kaxaysato ama tareenka raacdo, kaa saarayaa diiqada fadhinta saxmada, waxaaanad ka heleysaa jimicsigaagii maalintaa. Iyadoo ay jiraan kumanaan kale oo socdaalayaal beedhal-kusocda Seattle, waxaa jira khayraad badan kaa caawinaya inaad bilowdo.
Kuwa awooda, socodka qeybta ugu dambeysa ee socdaalkaaga ee suuqa hoose si aad uga fogaato cidhiidhigi culus, ama socodka wadada oo dhan hadii aad ku nooshahey masaafo macquula oo meeshaad tageyso ah, waa bilaash, dookh la isku haleyn karo oo adiga kuu fiican oo dhulkana u fiican.
Mapa peatonal del SDOT
Suuqa Hoose ee King County Qariirada Helida
Qariirada Helida King County
King County waxay ka shaqeysaa laba wado taksi biyood oo qaada rakaabka lugta iyo baaskiiladlayaasha suuqa hoose ee Seattle iyo Galbeedka Seattle (oo qaata ilaa 10 daqiiqo) ama Jasiirada Vashon (oo qaata ilaa 22 daqiiqo). Helid fudud iyo adeeg joogto ah waxey ka dhigayaan taksiga biyaha gobol ku haboon socdaalka kale.
Taksiga Biyaha King County
Adeega macaamiisha: 206-477-3979
Saxmada Wakhti ay jirto iyo qalab socdaal
Isticmaal qalabkan wakhitga-dhab ah kahor intaan socdaalkaagu ama wadada si aad u joogto mid cusub xaaladaha socdaalka ee ugu dambeeya.
Kaameradaha Socodka Gaadiidka ah ee Tooska ah ee WSDOT
Wakhtiyada Socdaalka WSDOT
Wararka socdaalka ee Twitter
Xeerka Ameerikaanka ee Laxaad La'aanta & Cinwaanka xogta VI
Xeerka Ameerikaanka Curyaanka ah (ADA) Warbixinta
Qoraalkaan waxaa lagu heli karaa qaab kale iyada oo iimeel ah loo soo dirayo Xafiiska Fursada Isku Midka ah ee wsdotada@wsdot.wa.gov ama adiga oo garaacaya, 855-362-4ADA(4232). Dadka dhagoolka ah ama ay ku adagtahay maqalka waxay codsi ku sameyn karaan adiga oo ka soo wacayo Washington State Relay 711.
Ogeysiiska Cinwaanka VI ee dadweynaha
Waa Siyaasada Waaxda Gaadiidka Dowlada ee Gobolka Washington (WSDOT) in la hubiyo in qofna aysan ku dhicin takoorid ku saleysan jinsiyad, midab, asal qarameed ama jinsi, sida ku cad Xeerka VI ee Xuquuqda Madaniga ee 1964, loomana diidi karo ka-qaybgalka faa'iidooyinka, ama lagama takoori karo mid ka mid ah barnaamijyada iyo dhaqdhaqaaqyada dowlada federaalku maalgeliso. Qof walba oo aaminsan in lagu xad gudbay VI ee illaalada, waxay uu cabasho u gidbin karaa Xafiiska Fursada Simman WSDOT (OEO). Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka cabashada ee CInwaanka VI iyo / ama macluumaadka ku saabsan waajibaadkayaga aan kala-takoorka ahayn, fadlan kala xiriir Isku-duwaha Cinwaanka VI (360) 705-7090.